Nhau - Rwisai denda pamwe chete
Pausiku hweChinese yechinyakare Mutambo weChirimo, COVID-19 yakapararira zvine chisimba. Denda rakadai rakabata munhu wese rakakonzera kukuvadza kukuru kumamirioni avanhu.
Kubva pakatanga, Shandong Limeng Pharmaceutical Co, Ltd. yanga ichiita nhamburiko dzese kugadzira uye kupa masiki, mishonga inouraya utachiona nezvimwewo zvinhu. Limeng Pharmaceutical yakaisa mari inopfuura yuan mamirioni mashanu kuti iwedzere iyo masiki yemashu musangano uye mashanu emasikisi michina.
Musi waFebruary 25th, Enhao Liu, iyo CEO weShandong Limeng Pharmaceutical Co, Ltd. yakapa yakapihwa mishonga yekuuraya utachiona uye masiki kumasangano manomwe anosanganisira majeri mudunhu reShandong. Pakati pavo, chiuru chemabhiramu makumi masere nemana makumi mana nemana nemabhodhoro chiuru emidziyo yekuuraya utachiona yakapihwa kuchipatara ichatumirwa kubva kuchipatara kuenda kuWuhan kwekudzivirira uye kudzora denda iri muWuhan. Hwerengedzo yemabhodhoro e5,600 emakumi masere makumi mana nemasere emishonga inouraya utachiona uye chiuru nemazana emabhiramu emakumi masere nematanhatu emishonga inouraya utachiona akapiwa panguva ino. Chidimbu chega chega chekuchengetedza zvinhu chinoratidza kubatana kwehukama hweLimeng Pharmaceutical, uye munguva ino yakakosha, zviito zvinoshanda zvinotorwa kutsigira denda rekudzivirira uye rekudzora basa
Shandong Limeng Pharmaceutical Co, Ltd. yave iri mukutsvagisa, kusimudzira, kugadzira uye kutengesa kwemushonga weChinese kwemakore makumi maviri nematanhatu, uye yakaverengerwa sebhizimusi repamusoro muJinan, chinzvimbo chemberi chine mipiro yakatanhamara kune hutano maindasitiri muShandong Province, inotungamira bhizinesi padanho redunhu muJinan zvichiteerana. Kunze kwezvo, iyo limeng brand trademark yakayerwa seyakakurumbira trademark muJinan. Limon Pharmaceutical ichagara ichitevedzera bhizinesi uzivi hwe "mutengi kutanga, kufambira mberi", anozvipira pakuve piyona wezvokudya zvine hutano, uye kupa mipiro mukuvakwa kwe "Hutano Limoni uye Hutano China".
Nenhamburiko dzakabatana dzekurwisa denda, tiri muchiito. Limon Pharmaceutical Co, Ltd. yakatora danho rekutora tarisiro yemakambani, uye nekuzvitungamira yakatungamira pakurwisa denda iri. Yakabatana nevanhu venyika yese kukunda matambudziko, ndokupa mipiro yekukunda hondo yekurwisa COVID-19.